Imigaqo kunye neemeko-Ukondla
Lonke ixabiso lixabiso leNet kwaye akukho khomishini. Ukuba ufuna i-invoice yirhafu, i-10% irhafu iya kongezwa. Amaxabiso acatshulwe kwimali kunye nezinye iindleko ezikhoyo ngexesha lokucela kwaye ke onke amaxabiso aphantsi kokuqinisekiswa kwakhona ngexesha lokubhukisha.
I-E yokhenketho Co, Ltd inamalungelo okutshintsha nawaphi na amaxabiso abakhenkethi okanye ngaphandle kwesaziso ngenxa yokunyuka kwamaxabiso ehotele, ukuhamba komoya, iindleko zothutho, kunye notshintsho lweqondo lokutshintsha. Ukuchithwa kwesizini ephezulu kuya kusebenza kwiindleko zokuhamba, indawo yokuhlala kunye nokuhamba ngomhla omiselweyo; iindibano, iminyhadala, iiholide, okanye impelaveki.
A. Idiphozithi yokhuseleko
Njengedipozithi, i-10% yexabiso elipheleleyo labakhenkethi kufuneka lihlawulwe ngaphakathi kweentsuku ze-3 emva kokuqinisekiswa.
B. Intlawulo yokuLungelelanisa
Ibhalansi yeNtlawulo kufuneka ihlawulwe kwiveki enye phambi kohambo luqale. Ukuba idipozithi kunye
imali eseleyo ayibhatalwa, ukubhukishwa kuya kurhoxiswa.
Amanani aza kusebenza kunyaka omnye ukusuka ngoMatshi kulo nyaka ukuya kuFebruwari kunyaka olandelayo ngaphandle kokuba kukho esinye isaziso.
Ukubhukisha kwamkelekile kwifeksi kunye ne-imeyile kuphela.
I-E Tourism Co, Ltd iya kuphendula nge-imeyile okanye ngefeksi ngokukhawuleza.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuba samkele izicelo zakho kanye njengoko uceliwe.
A. Iintlawulo ezizeleyo kufuneka zihlawulwe kwiakhawunti yethu yebhanki kude kube ngumhla ngqo oboniswe kwi-invoice esiyithumeleyo. Ukuba awufikeleli kumhla obekiweyo, ukubhukisha kuya kurhoxiswa ngokuzenzekelayo.
B. Ukuba uhlawula ngekhadi letyala okanye ngePaypal, kuya kubakho imali eyongezelelweyo eyi-5% kwirhafu yamaxabiso.
C. Idrafti yebhanki okanye itsheki yecashiya mayithunyelwe kwi-ofisi yethu.
D. Inkampani okanye isheke yakho ayamkeleka.
Ukucinywa kwamalungiselelo aqinisekisiweyo, umrhumo wokucinywa unokuhlawuliswa ngokufanelekileyo.
Iindleko zokuhamba ezingasetyenziswanga kwisiganeko, aziyi kubuyiselwa kumthengi Umthengi othe urhoxisile ukubhuka uya kuhlawula iindleko zebhanki kwimbuyiselo.
Iindleko zokurhoxiswa ziya kusetyenziselwa ukucima iihotele, iimoto, iityhefu, iinqwelomoya njalo njalo. Intlawulo yokuCima iya kuhlawuliswa njengoko kubonisiwe ngezantsi.
I-1) Nje ukuba ubhatale idipozithi: 10% yexabiso lokuhamba lonke.
I-2) Ukucima i-15 ~ 8Iintsuku ngaphambi kohambo olucwangcisiweyo: I-30% yexabiso lokuhamba lonke.
I-3) Ukucima i-7 ~ 3Iintsuku ngaphambi kohambo olucwangcisiweyo: I-50% yexabiso lokuhamba lonke.
I-4) Ukucima i-2Iintsuku zangaphambi okanye ngalo kanye usuku lokhenketho olucwangcisiweyo luqala: I-100% yexabiso lokuhamba lonke.
* Nceda uqaphele ukuba asinoxanduva lwentlawulo ye-5% yokuhlawula ikhomishini.
-Nokuba ukubuyiselwa kwe-100%, awuyi kuba nakho ukufumana imbuyiselo yemali ye-5% yokuhlawula ikhomishini.
I-E Tourism Co, Ltd ayinoxanduva lokulahleka okungalindelekanga, ukonakaliswa, ingozi kunye nokutshintsha kwexesha.
Ukongeza, iishedyuli zinokutshintshelwa kolwaneliseko lomthengi olungileyo kunye okanye ngaphandle kwesaziso.
E Ukhenketho Co., Ltd ilungiselele eyona nkonzo ibalaseleyo yokhenketho kunye neeshedyuli zokhenketho.
Uninzi lotyelelo lufumaneka unyaka wonke, nangona kunjalo iinkqubo ezifana neSki, Rafting, ukubukela kweentaka kukhawulelwe izizathu zonyaka. Utyelelo lwasePanmunjeom alusebenzi ngeCawa kwaye zombini iiholide zaseKorea nase-USA kwaye imihla yokhenketho inikwa emva koqwalaselo lokhuseleko nguMlawuli weZizwe eziManyeneyo.
Umntwana ongaphantsi kweminyaka ye-11 akavumelekanga ukuba ajoyine. Ukhenketho lwe-DMZ (Umgaqo we3rd) uvaliwe ngeMivulo.
Yonke inkonzo iya kubonelelwa ngamaNgesi, isiJamani, isiTshayina, isiFrentshi, isiTaliyane, isiThai, iSpanish, isiJapan okanye isiRashiya.
Yinjongo yethu yonke ukulandela yonke imihla uhambo, nangona sikhona kwinqanaba lokuguquguquka ukuze sithathele ingqalelo naziphi na izinto ezibonakala ngathi zibalulekile okanye umdla othile abathengi banokuba nawo.
Ngamaxesha athile, ngenxa yezinto ezahlukeneyo zokusebenza, kuvame ukulibaziseka kweenqwelomoya kunye notshintsho lweeshedyuli okanye imyuziyam ivaliweyo, kunokubakho utshintsho oluncinci kumalungiselelo.
Lonke ugcino lwegumbi lusekwe kumagumbi asemgangathweni ngaphandle kokuba kukho umyalelo okhethekileyo.
Onke amagumbi kufuneka abhukishwe kwangaphambili kwaye ubhukisho lweentsuku ezifanayo alunakwenzeka.
Kwimeko apho amagumbi engafumaneki, kuya kufakelwa indawo yokuhlala efanayo.
Nawuphi na umahluko kudidi kunye neendleko zinokwahluka ngokuxhomekeke kukhetho lwakho.
Ukhenketho lwepakeji lusekwe kubantu begumbi elinye.
I-E Tourism Co, Ltd ihlala icwangcisa izithuthi ezifanelekileyo nezikhuselekileyo ezinamava nabaqhubi abanesidima, abaxhotyiswe ngombane womoya kunye ne heater.
Iindlela zokuhamba ziphantsi kwemiqathango ekuvunyelwene ngayo, nangona kunjalo, sinika abathengi bethu ngemoto okanye iveni (i-1-2persons), iveni (3-8persons), ibhasi encinci (i-8-15persons) kunye ne-motorcoach (I-15-40persons).